तपाईं को पेट बढीरहेको छ? कसरी पाउने छुट्कारा -
फोटो फिचर विचार/ब्लग स्वास्थ्य
२०७५, १३ जेष्ठ आईतवार २०:५२ May 27, 2018 clickonLeaveaComment on तपाईं को पेट बढीरहेको छ? कसरी पाउने छुट्कारा
तपाई कही पेट् बढेको समस्या ले चिन्ता मा त हुनु हुन्न?
तपाई सधै लगातार एकै ठाउु मा बसि राख्नु हुन्छ र तपाई को दिन् चर्या मा कम् मेहेनत् हुन्छ भने तपाई को पेट् बढ्छ भने कुर सधै सचो पनि न हुन सक्छ। कहिले काही धेर मेहेनत् गर्ने मानिस् हरु पनि यो समस्या बाट प्रभाबित् हुन्छन्। ल अौनुहोस् हेरौ यो पेट् बढ्ने खास् कारन् के रैछ?
पहिलो कुरा त येदि तपाई आफ्नो पेट् घटाउन चाहनु हुन्छ भने पेट् मात्र हैन पुरै सरिर् मा लागेको बोसो पनि घटाउने पर्ने हुन्छ। त्येस्को लागी सबै भन्दा राम्रो उपाय भनेको कुनै बिसेसग्य को रेख्देख् र सल्लाह् अनुसार् हफ्ता मा कम्ति मा ४ दिन् जति ब्य्याम् गर्नुस्। ब्य्याम् को कुरा गर्दा सबैइ भन्दा राम्रो भनेको दौड्नु हो। दौड्दा तपाई को सरिर् मा भयेको बोसो या चर्बी पग्ल्न्छ, जुन् स्वास्थ को लागी राम्रो हो।
त्येस् का साथै एकै ठाउु या स्थान् मा बसेर कार्य नगर्नुस्, सक्भर् येता उता हिडेर काम् गर्ने बानि गर्नुस्। येस्को अतिरिक्त तपाई ले आफ्नो खान् पिन् मा पनी ध्यान् दिनु पर्छ। खान मा चिल्लो र गुलियो प्रदार्थ को मात्रा कम् गर्नुस्। येस्ले तपाई को पाचन् क्रिया मा मदत्त् गर्छ।
येदि तपाई ले यो सबै कुरा हरु लाई मध्ये नजर् गरि आफ्नो दिन्चर्या यापन् गर्नु भयो भने पक्कै पनि मोटो सरिर् र पेट् बढ्नु बाट छुट्कारा पाउन सक्नु हुन्छ।
नेकपा प्रदेश न ३ को संसदीय दलको नेतामा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल सर्वसम्मत
२०७५, १४ मंसिर शुक्रबार २०:३६ November 30, 2018 clickon
अंकल साइनो लगाईयको मान्छेले पनि बालीकालाई बलात्कार, भरोषा कस्को?
२०७५, ३० आश्विन मंगलवार ०२:०२ October 16, 2018 clickon
नेपाली क्रिकेटको यति ठुलो उपलब्धीले सबै नेपालीहरु खुशी त हुनु भयो तर के तपाई लाई थाहा छ खेलाडीहरुको दुख, (भिडिओ)
२०७५, २६ माघ शनिबार ०५:५६ February 9, 2019 clickon